Usoro mkpesa ụlọ ọrụ | Law & More B.V.
Law & More na-akwanye afọ ojuju nke ndị ahịa anyị. Firmlọ ọrụ anyị ga-eji mbọ kacha mma iji jeere gị ozi. Agbanyeghị na ọ ga - eme na enweghị afọ ojuju maka otu akụkụ nke ọrụ anyị. Below ga - ahụ n’okpuru omume ị ga - eme n’ụdị ọnọdụ a.
A sị na enweghị afọ ojuju maka nrụpụta ọrụ na ntinye nke ọrụ, ogo ọrụ anyị ma ọ bụ ego akwụkwọ ọnụahịa anyị, a ga-arịọ ka itinye akwụkwọ mkpesa gị n'ihu onye ọka iwu nke gị. Can nwekwara ike ịkpọtụrụ Mr. TGLM Meevis nke ụlọ ọrụ anyị. Firmlọ ọrụ anyị ga-edozi mkpesa ahụ na usoro ahụ akọwara na usoro mkpesa nke ọfịs anyị.
Anyị ga, na gị na ndụmọdụ ị ga -achọ maka nsogbu a buliri ozugbo enwere ike. Anyị ga-egosipụta nkwenye dị otú ahụ mgbe niile na ederede. I nwere ike ile anya na anyi ga-anata mmeghachi omume anyị na mkpesa gị n'ime izu anọ. N'ọnọdụ anyị kwesịrị ịhapụ okwu a, anyị ga-agwa gị ka oge na-aga, anyị ga-ekwupụta ihe kpatara mgbaghobi ahụ na okwu a ị nwere ike ịtụ anya mmeghachi omume n'aka anyị.
N'ime usoro mkpesa ndị a, usoro edepụtara n'okpuru ga-enwe ihe ndị a:
mkpesa: nkwupụta ọ bụla edere nke afọ ojuju site na ma ọ bụ na nnọchite onye ọka iwu na onye ọka iwu ma ọ bụ onye ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru ọrụ ya gbasara mmechi ma ọ bụ igbuzu onye ahịa ya maka ọrụ ndị ọkachamara (overeenkomst van opdracht), ogo nke ụdị ọrụ ahụ enyere ma ọ bụ ego ole akwụ ụgwọ maka ụdị ọrụ ndị a, ewezuga etu ọ dị, mkpesa n'ime ihe dị na paragraf nke 4 nke Iwu Netherlands gbasara ọka iwu ọka iwu (Advocatenwet);
mkpesa: onye ahịa ma ọ bụ onye nnọchi anya ya, na-etinye akwụkwọ mkpesa;
onye uwe ojii mkpesa: onye ọka iwu nke eboro ebubo ijikwa mkpesa, na mbụ Mr TGLM Meevis.
Nkeji edemede 2 Mbara nke ngwa
2.1 Usoro mkpesa a metụtara ọrụ ọ bụla maka ọrụ ndị ọkachamara sụgharịrị Law & More B.V. ndị ahịa ya.
2.2 obu oru nke onye oka iwu obula Law & More B.V. ijikwa mkpesa niile n'usoro usoro mkpesa a.
Ebumnuche Nke 3
Ebumnuche nke usoro mkpesa a:
idobe usoro nke a ga-esi mee mkpesa ndị ahịa n'ụzọ ga-agbanwe agbanwe ma n'ime oge dị mma;
idobe usoro iji gosipụta ihe (s) nke mkpesa onye ahịa;
iji kwado ma melite mmekọrịta ndị ahịa dị adị site na ijikwa mkpesa n'ụzọ kwesịrị ekwesị;
iji kwalite mmeghachi omume na mkpesa ọ bụla na ụdị onye ahịa lekwasịrị anya;
iji melite ogo nke ọrụ site na idozi na nyocha mkpesa.
Nkeji edemede 4 Ozi banyere mmalite nke ọrụ
4.1 Emeela usoro mkpesa a n'ihu ọha. N'akwụkwọ ozi ọ bụla metụtara onye ahịa, a ga-agwa onye ahịa ahụ na enwere usoro mkpesa dị, na usoro a ga-emetụta ọrụ enyere.
4.2 Ọkọlọtọ nke njikọ aka (usoro na ọnọdụ) nke metụtara ọrụ ntinye ọ bụla (nke sitere na akwụkwọ ozi ọ bụla na onye ahịa) ga-achọpụta ndị otu nọọrọ onwe ha ma ọ bụ otu onye / nke mkpesa na-edozibeghị na usoro mkpesa a nwere ike ibunye iji nweta mkpebi siri ike.
4.3 Mkpesa banyere ihe edemede 1 nke usoro mkpesa a na-edozighi mgbe ejiri ha mee ihe dabere na usoro mkpesa a nwere ike ịnyefe Kọmitii Mkparịta ụka Esemokwu (Geschillencommissie Advocatuur).
Nkeji edemede 5 Usoro mkpesa ime
5.1 Ọ bụrụ na onye ahịa abịarute ọfịs yana mkpesa gbasara ntuziaka enyere Law & More B.V.., A ga-ezigara ndị na-eme mkpesa na-eme mkpesa.
5.2 Onye uweojii na-eme mkpesa ga-agwa onye ahụ emere mkpesa megide ya banyere itinye akwụkwọ mkpesa ma nye onye na-eme mkpesa na onye e mere mkpesa megide ya ohere ịkọwa mkpesa ahụ.
5.3 Onye ahu emere mkpesa imegide ya ga agbali idozi okwu a ya na onye ahia ya kwesiri, ma obu onye oru nke ndi mkpesa mere.
5.4 Onye na-ahụ maka mkpesa ga-edozi mkpesa n’ime izu anọ ka ọ natachara mkpesa ahụ, ma ọ bụ gwa onye na-eme mkpesa, na-ekwupụta ihe kpatara ya, nke ọ bụla na-agbanwe okwu a, na-egosi oge nke a ga-esi nwee echiche gbasara mkpesa.
5.5 Onye na-ahụ maka mkpesa ga-agwa onye na-eme mkpesa na onye e mere mkpesa megide ya banyere ederede banyere echiche gbasara uru nke mkpesa, ma yana ndụmọdụ ọ bụla ma ọ bụ na ọ bụghị.
5.6 Ọ bụrụ na e lebara mkpesa ahụ anya n'ụzọ na-eju afọ, onye mkpesa, onye ọrụ mkpesa na onye emere mkpesa ahụ ga-abịanye aka n'echiche banyere uru nke mkpesa ahụ.
Nkeji edemede 6 Nzuzo na enweghị mkpesa na-enweghị njikwa
6.1 Onye na-ahụ maka mkpesa na onye e mere mkpesa megide ya ga-edebe nzuzo n'ihe gbasara njikwa nke mkpesa ahụ.
6.2 Mkpesa obula agagh akari gi ugwo obula ugwo nke ijikwa mkpesa.
Nkeji edemede 7 ọrụ
7.1 Onye uweojii na-eme mkpesa ga-ahụ maka njikwa mkpesa n'oge.
7.2 Onye ekwesoro imegide ya ga-eme ka onye ọrụ mkpesa banyere onye ọ bụla kpọtụrụ onye mkpesa yana azịza ọ bụla bara uru.
7.3 Onye uweojii na-eme mkpesa ga-eme ka onye mkpesa ahụ mara banyere njikwa nke mkpesa ahụ.
7.4 Onye na-ahụ maka mkpesa ga-ahụ na e debere faịlụ na mkpesa ahụ.
Nkeji edemede 8 Ntinye akwụkwọ mkpesa
8.1 Onye uweojii na-eme mkpesa ga-edebanye akwụkwọ mkpesa ahụ, na-achọpụta isiokwu nke mkpesa ahụ.
8.2 Enwere ike ikesa mkpesa n'ime isiokwu di iche.
8.3 Onye na-ahụ maka ndị na-eme mkpesa ga -ewepụta oge site na njikwa mkpesa ọ bụla ma na-atụ aro iji gbochie mkpesa ọhụrụ na-ebilite yana iji melite usoro.
8.4 A ga-atụle mkpesa na ntụnye ọ bụla maka mkpebi ọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ.